Wac rugtaada WIC haddii…
Waxaad qabtaa su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xaddi ahaan
Aadan awoodin inaad iibsato cunto aad u maleyneyso inay WIC ogolaatay
Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday, ama dhaawacmay
Ka wac Adeegga Macaamiisha ee Xerox 1-855-222-0510 haddii…
Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday ama dhaawacmay
Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ama bedesho lambarkaaga PIN
Ka wac xafiiska WIC ee Gobolka at 860-509-8084 ama lacag la'aan xaga 1-800-741-2142 haddii…
Waxaad dhibaato ku qabtaa sameynta iibsashada kaarkaaga eWIC
Maxaan sameeyaa haddii kaarkayga uu lumo ama la xado?
Wac WIC deegaankaaga ah Barnaamijka isla markiiba! Waxay joojin doonaan qof kasta inuu isticmaalo dheefahaaga cuntada oo kaa caawiyo inaad hesho kaar cusub.
Ka waran haddii kaarkeygu aanu shaqayn?
Wac lambarka bilaashka ah ee ku yaal dhabarka kaarkaaga ama Barnaamijka WIC ee degaankaaga.
Goorma ayaan heli doonaa macaashkayga?
Gargaarka cuntada ee hadda lagu bixiyo xafiiska WIC ayaa isla markiiba heli doona. Faa'iidooyinka Cuntada ee bilaha soo socda waxaa laguugu soo shubi doonaa kaarkaaga eWIC ee 12: 00 bartamaha bilowga iyo taariikhda ugu dambaysa waxay ku dhici doontaa 12: 00 badhkeedda maalinta dhammaadka.
Maxaan ku sameeyaa kaarkayga ka dib marka la iga faa'iideysto manfacyada?
KAARKA DIIWAANGADA EWIC! Xitaa marka dhammaan cuntooyinka WIC la iibsaday, kaarkaaga ayaa dib loo isticmaali karo. Lacagta soo socota ee soo socota ayaa lagu iibsan doonaa isla eWIC kaarka.
Maxaa dhacaya haddii aanan sameyn karin dukaankayga gaarka ah oo aan ubaahanahay qof kale inuu ii iibiyo?
Waxaa laga yaabaa in qof kale uu kuu dukaamaysto haddii aad rabto. Waxaad ku siin kartaa kaarkaaga eWIC iyo PIN. Kaliya hubso in tani ay tahay qof aad ku kalsoon tahay!
Maxaa dhacaya haddii dhammaan cuntooyinka WIC aan la iibsan? Macaashyadani ma ku dhici doonaa bisha xigta?
Maya, faa'idooyinka aan la isticmaalin waxay dhacayaan taariikhda ugu dambeysa.
Riix hoose si aad u aragto liiska cuntada ee Connecticut WIC af Ingiriis ama Isbanish.
Ka eeg liiska cuntada ee Ingiriisi
Waxaad ka eegi kartaa dheelitirka xisaabtaada dhowr siyaabood:
Isticmaal ikhtiyaarka "Faa'iidooyinkayga" barnaamijka WICShopper si aad u qabato sawir rasiidhada waxtarkaaga ah
Hubi rasiidkaada ugu dambeysa.
Eeg dukaanka dukaanka raashinka ama tag Xarunta Adeegga Macaamiisha si aad u daabacdo inta ka hartay dheelitirkaaga.
Wac lambarka lacag la'aanta ah ee dhabarka kaarkaaga eWIC si aad u hesho baaqi dheelitiran.
Booqo www.ebt.acs-inc.com si aad u aragto una daabacato dheelitirkaaga.
Booqo akoonkaaga internetka www.ebt.acs-inc.com